Zazalahy 13 taona antsoina hoe Rabenandrasana Josely no nirahina nividy lasantsy (essence) 5 litatra. Rehefa niverina izy no tafintohina, ka nianjera raha tafiditra tao an-trano, araka ny fanazavana azo. Lakozia anefa ny efitra voalohany miditra amin'io tokantrano io, izay nisy afo nirehitra rahateo tamin'izany fotoana izany. Very taminy sy niparitaka tamin'ilay afo ny lasantsy nentiny ka vetivety dia nahazo ny vatany iray manontolo ny lela afo. Niezaka namonjy azy ny olona nipetrahany, izany hoe ny mpampiasa azy, saingy tsy tana intsony ny ainy, hoy hatrany ny vaovao. Nampanano sarotra ny famonjena azy ihany koa, ny akanjo "Nylon".